Nentin’i Josefa sy Maria tao An-tempoly i Jesosy | Fiainan’i Jesosy
Ilay Zaza Nampanantenaina
NOFORANA I JESOSY ARY NENTINA TAO AMIN’NY TEMPOLY TATỲ AORIANA
Nijanona tao Betlehema i Josefa sy Maria fa tsy nody tany Nazareta. Noforana i Jesosy rehefa feno valo andro, araka ny Lalàn’Andriamanitra ho an’ny Israely. (Levitikosy 12:2, 3) Fanao koa ny manome anarana ny zazalahikely amin’io andro io. Nataon’izy ireo hoe Jesosy ilay zanany, araka ny nolazain’ny anjely Gabriela.
Iray volana mahery no lasa, ary feno 40 andro i Jesosy. Nentin’ny ray aman-dreniny niakatra tany amin’ny tempolin’i Jerosalema izy tamin’izay. Tsy dia lavitra ny nisy azy ireo izany. Milaza ny Lalàna fa tokony hitondra fanati-panadiovana any amin’ny tempoly ny vehivavy iray tera-dahy, 40 andro aorian’ny ahaterahany.—Levitikosy 12:4-7.
Nanao izany i Maria. Nitondra vorona kely roa izy hatao fanatitra. Hita amin’izany fa nahantra i Josefa sy Maria. Ondrilahy kely iray sy vorona iray mantsy no nasain’ny Lalàna natolotra. Raha tsy afaka nividy ondrilahy anefa ilay reny, dia afaka nanome voromailala roa na domohina roa. Tsy afaka nividy ondrilahy i Maria, ka vorona no nomeny.
TONGA “NY ANDRO FIDIOVAN’IZY IREO”
Noheverina ho naloto nandritra ny andro maromaro ny vehivavy israelita avy niteraka. Nila nanolotra fanatitra dorana ho fanati-panadiovana izy, rehefa nifarana ireo andro ireo. Nampahatsiahy ny rehetra izany fa nampita aina tsy lavorary na nisy ota ilay vehivavy. Lavorary sy masina i Jesosy. (Lioka 1:35) Nentin’i Maria sy Josefa “niakatra tany” amin’ny tempoly ihany anefa izy, satria nankatò ny Lalàna momba ny ‘fidiovana’ izy ireo.—Lioka 2:22.
Nisy lehilahy be taona nanatona an’i Josefa sy Maria, tao amin’ny tempoly. Simeona no anarany. Nambaran’Andriamanitra taminy fa hahita an’i Kristy na ny Mesia nampanantenain’i Jehovah izy, alohan’ny hahafatesany. Notarihin’ny fanahy masina ho ao amin’ny tempoly i Simeona tamin’io andro io, ka nahita an’i Josefa sy Maria niaraka tamin’ilay zanany kely. Noraisin’i Simeona ilay zaza.
Nisaotra an’Andriamanitra i Simeona rehefa nitrotro an’i Jesosy, ary hoy izy: “Ry Tompo Fara Tampony ô, avelanao handeha amim-piadanana amin’izay ankehitriny ny mpanomponao, araka ny efa teninao, satria efa hitan’ny masoko ny fomba hitondranao famonjena, izay nomaninao teo imason’ny firenena rehetra, dia hazavana izay hanala ny zavatra manarona ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao.”—Lioka 2:29-32.
Gaga i Josefa sy Maria nandre izany. Nitso-drano azy ireo i Simeona ary nilaza tamin’i Maria fa “atao ho fandavoana sy fananganana ny maro amin’ny Israely” ilay zaza. Halahelo be koa i Maria, hoy izy, ka ho toy ny voatrobaky ny sabatra.—Lioka 2:34.
Teo koa i Ana, mpaminanivavy 84 taona. Tonga tsy tapaka tao amin’ny tempoly izy. Nanatona an’i Josefa sy Maria ary Jesosy izy tamin’izay, ary nisaotra an’Andriamanitra sy niresaka momba an’i Jesosy tamin’izay rehetra nihaino azy.
Azonao an-tsaina angamba ny hafalian’i Josefa sy Maria, noho ireo zava-nitranga tao amin’ny tempoly ireo. Nanome toky azy ireo izany fa ilay zaza nampanantenain’Andriamanitra tokoa ilay zanany.
Araka ny fanaon’ny Israelita, oviana no nomena anarana ny zazalahikely?
Inona no tokony hataon’ny reny iray rehefa feno 40 andro ny zanany lahy? Nanao ahoana ny fari-piainan’i Maria rehefa jerena ny fanatitra nataony?
Iza tao amin’ny tempoly no nahalala hoe iza i Jesosy? Ahoana no nampisehoan’izy ireo izany?
Hizara Hizara Ilay Zaza Nampanantenaina